Waxa Lagu Dhawaaqi Dhawaanshaha “Saacadda Qiyaame” khamiista ! | Xaqiiqonews
Waxa Lagu Dhawaaqi Dhawaanshaha “Saacadda Qiyaame” khamiista !
Shir lagu qaban doono khamiista soo socoto magaalada Washington ee dalka Mareykanka aya saynisyahano ka socda kooxda “The Bulletin of the Atomic Scientists” kaga hadli doonaan wax iska badalay balanka “Saacadda Qiyaamaha”.
Hadda saacadda Qiyaamaha waxaa ka harsan lab daqiiqo oo kaliya, dowr mar ayaan la isku dayey in saacadda dib loo celiyo- sida ay sheegtay jariidada “Express” ee ka soo baxda biritan.
Saacadda Qiyaama ee saynisyahanadan ay ka hadlayaan waa mid “Calaamadeed” ay dajiyeen khubaro ku takhasusay nukliyeerka iyo atamka sanadkii 1947-kii.
Saacaddan qiyaame ayaa had iyo jeer uga digta dadweynaha soo dhawaanshaha aduun gadoonka, 2-da daqiiqe ee dhiman waxa ay is buuxin kartaa hadii uu yimaado in waddan isticmaalo hub nukliyeer ah taasi keeni karto in ban’aadamka baaba’aan.
Saacadda hadda waxa y tilmaameysaa 11:58 daqiiqo, sida ku cad bogga macluumaadyada keydiya ee “Wikipedia”.
Kulanka dhici doona khamiista ayaa la filayaa in khubarada ay xadidaan halka ay saacaduu mareyso sanadkan cusub 2020, iyo waxyaabaha laga filan karo,.
Dadka ugu cadcad ee kulankaasi hogaamin doono waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Irland Mary Robinson,xoghayii hore ee qaramada midoobay Ban Ki-moon iyo gudoomiye hore ee gobolka Kalifoorniya Jerry Brown.